Ubuntu Bata OTA-8 iri pano, uku ndiko kugadzirisa kwayo | Linux Vakapindwa muropa
Nharaunda yeUBports nhasi yatangisa iyo XNUMXth OTA inogadziridza yeUbuntu Kubata inowanikwa kune ese anotsigirwa nhare mbozha.
Pakati pezvimwe zvinhu, Morph Browser ikozvino inoratidza peji rekukanganisa kana rikasangana nekanganiso paunenge uchirodha peji, rinogadzirisa bhagi rekutanga kurodha mamwe maWebhu Apps, tsigiro yemashandisi ezvinyorwa zveWebhu Apps, uye inogadzirisa khibhodi kodhi inoratidza zvisirizvo pane vamwe zvidzitiro.
Pakati pedzimwe shanduko dzakauya neUbuntu Kubata OTA-8 tinogona kutaura kuti iyo Android pre-kutanga script yakagadziridzwa neiyoum-boot, bvunzo yekushanda muUbuntu UI Toolkit yakagadziriswa uye zvisina kukoshesa zvakakosha zvakabviswa kubva kuZvirongwa uye "Wedzera mugamuchiri "muchirongwa chekutumira mameseji.
Ubuntu Bata OTA-8 ine ARM64 rutsigiro
Ubuntu Bata OTA-8 inomutsawo rutsigiro rweARM64, iyo inobvumira vanogadzira kuti vatore Ubuntu Kubata kune mamwe madhijitari, inovandudza USB tethering, uye inogadzirisa bugs neVanobata, Kero, uye Initial Zvirongwa zvinoshandiswa.
Ubuntu Bata OTA-8 ichasvika pakupedzisira mumazuva mashoma anotevera yezvinhu zvese zvinoenderana, zvinosanganisira Fairphone 2, OnePlus One, BQ Aquaris E5, BQ Aquaris M10 FHD, BQ Aquaris M10 HD, Meizu MX 4, Meizu PRO 5, Nexus 4, Nexus 5, uye Nexus 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Ubuntu Bata OTA-8 iri pano, uku ndiko kugadzirisa kwayo
Zvakanaka hazvo ichiri mukusimudzira, zvishoma zvinopa dombo. Iko mukana wekubatana ndechimwe chinhu nekuti kana ndangariro yangu ikakundikana, UT inoshandisa Unity8 uye Ubuntu yatove yakachinjira kuGnome Shell imwe nguva yapfuura, kana vakaburitsa flavour - kunyangwe yaive yechipiri - neUni8, inogona kuva fungidziro yeramangwana riri nani, asi parizvino inopenda zvese zvakasviba kwazvo mupfungwa iyoyo.
Ini ndinoda iyo Ubuntu interface uye ini ndoda kuiona pane Xiaomi.
Mhoroi, ndine BQ Aquaris M10 HD ine android. Imwe nguva yapfuura ndakaedza kuipfuudza kuUbuntu (ini ndakanga ndisati ndatonga canonical chirongwa ichi) asi ini ndakaona kuti zvaive zvisingaite kana isiri iyo vhezheni yeubuntu yezvinhu zvekupa marezinesi, kana ndikarangarira nemazvo.
Pane chero munhu anoziva kana izvi zvachinja uye ikozvino zvinoita here kuisa ubuntu kutafura yangu?
Yakave nguva yakareba kubvira pavakarega kukwidziridzwa ye android uye switching ku ubuntu kwaizondipa yakawedzera kuvandudzwa system.
Ini ndinofunga iwe wakavhiringidzika, nekuti Ubuntu iri mumiyedzo kwete nekuti haina whatsapp kana rutsigiro rweapplication.
Ini ndinokurudzira iwe zvirinani rom yefoni yako